पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका यी ७ गोप्य रहस्य,एकचोटी पढ्नुहोस् !:: Naya Nepal
पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका यी ७ गोप्य रहस्य,एकचोटी पढ्नुहोस् !
कहिले काँहि पुरुषहरु महिलाको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको ठानेर भ्रममा समेत पर्ने गर्छन् । किन कि कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन महिलाले पुरुषलाई थाहै दिँदैनन् । यस्ता छन् पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका ७ रहस्यहरु, जानी राखौ ।एक महिला अर्की महिलासँग प्रेम गर्छे महिला पुरुषसँग मात्र आकर्षित हुन्छे भन्ने ठान्नु भएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ । खासमा एक महिला अर्की महिलाको दुश्मन ठानिएपनि महिलाले महिलालाई एकदम प्रेम समेत गर्छन । कतिपय महिलालाई आकर्षक बनेर हिँड्ने महिलालाई बारम्बार देख्न मन समेत लाग्ने गर्छ ।
३. अ’श्लिल चलचित्र हेर्न महिलालाई पनि मन पर्छ अश्लिल चलचित्रका पारखी पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने सोंच्नु भएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ । खासमा केटीहरु पनि अ’श्लिल चलचित्र हेर्न मन पराउँछन् । तर उनीहरुले यस्तो चलचित्र हेरेको कुरा कहिल्यै पनि स्वीकार भने गर्दैनन् ।
६. इर्श्या कुनै पनि महिलाको लागि प्राकृतिक गुण नै हो भन्दा पनि हुन्छ । विवाह गरेपछि हतारमा आमा बन्न नचाहने केटी अरुका सन्तान देखेर भने इर्श्या गर्छन् । आफूलाई महिलाका समस्याका कारण दुखाइ वा पी’डा हुँदा पतिलाई पनि त्यस्तै भैदिए हुन्थ्यो जस्तो उनीहरुलाई लाग्छ ।
७. रहस्य जान्ने इच्छा हरेक महिलालाई आफ्ना पुरुष साथी वा पतिप्रति केही न केही कुरा लुकाएको सं’का हुन्छ । उनीहरु त्यो कुरा जान्न चाहिरहेका हुन्छन् ।
सोसल मिडिया एप टिकटक माथि सरकारले लगायो आज देखि प्रतिबन्ध
पाकिस्तानले चिनियाँ सोसल मिडिया एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘अ’नैतिक’ र ‘अ’श्लील’ सामग्री रोक्न नसकेको भन्दै टिकटकमाथि प्र तिबन्ध लगाइएको पाकिस्तान सरकारले जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तान दुरसञ्चार प्राधिकरण(पीटीए) ले समाजका विभिन्न तप्काबाट टिकटकमा सेयर हुने विषयबस्तुमाथि गु नासो बढेपछि प्र’तिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको बताएको छ ।
टिकटकले ‘अश्लील’ र ‘अनैतिक’ सामग्री नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्रै प्रतिबन्धको समीक्षा गर्न सकिने पनि पीटीएले जनाएको छ । यसबारेमा समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग प्रतिक्रिया दिँदै टिकटकले ‘जहाँ यो एप प्रयोग भइरहेको छ, त्यहाँको कानुन पालना गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध’ रहेको बताएको छ । उसले यसबारेमा पीटीएसँग लगातार कुरा भइरहेको पनि बताएको छ ।
पीटीएका अनुसार पाकिस्तानमा प्रतिमहिना टिकटकका २ करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेका छन् । पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांक हेर्दा पाकिस्तानमा ह्वाट्सएप र फेसबुकपछि टिकटक एप सबैभन्दा बढी डाउनलोड गरिएको छ ।
टिकटक चिनियाँ कम्पनी बाइटडाइन्सको सोसल मिडिया एप हो । पछिल्लो समय यो एप युवा पुस्तामाझ निकै नै लोकप्रिय मानिन्छ । तर यसमा पोस्ट हुने विषयबस्तुलाई लिएर भने बेलाबेलामा वि वाद उत्पन्न हुने गरेको छ । केही समयअघि भारतले सु रक्षा सं वेदनशीलताको कारण देखाउँदै टिकटकसहित सयभन्दा बढी चिनियाँ एपमाथि प्र’तिबन्ध लगाएको थियो ।